Ku ilaali xogtaada EncFS | Laga soo bilaabo Linux
Waqti ka hor Waxaan tusay sida loo ilaaliyo faylkeena iyo waxa ku jira iyada oo la adeegsanayo Qubays, codsi aan ka heli karno keydadka qaybinta aan ugu jecel nahay.
Marka laga hadlayo Arch Linux, Qubays waa gudaha AUR, iyo in kastoo aan rakibi karo haddana ma aanan dareemin inaan wax ku daro Yori ama isticmaal makepkg. Marka waxaan is idhi: Qubays Waa inuu ahaadaa dhamaadka hore ee codsi kale. Iyo runtii, Qubays waa horumar hore loogu talagalay EncFS (Si wanaagsan ayaan wax u cunaa) faallo ka bixiyay waqtiga isticmaalaha mxs).
Maxaa loo hagaajiyay? Sababtoo ah Qubays waxay muujinaysaa / qarinaysaa galka aan ku keydinayno waxyaabahayaga, kuwaas oo EncFS ma sameeyo. Laakiin si fudud ayaan u qaban karnaa.
Tusaalahan waxaan u malaynayaa inaynu hore u haysanay galka sirta ah. Badanaa waxay ku yeelan doontaa caadada magaca hortiisa, tusaale ahaan .Shaqsooni.
Hadda aan dhahno waxaan rabaa inaan galo galka khaaska ah. Waxa ugu horreeya waa in la rakibo EncFS.
Haddii aan rabno inaan ku dhejino galka faylka la adeegsadey isticmaaleheenna (oo aan isticmaalin sudo), waa inaan rakibnaa xirmada caymiska iyo xaalada Debian, ku dar isticmaaleheena kooxdaas:
Yaab leh Arch Linux Uma baahnin inaan ku daro adeegsadeheyga kooxda caymiskaXaqiiqdii, ma jiraan koox noocaas ah. o_O
Hadda, si loo muujiyo galka .Private, waa inaan abuurnaa galka madhan si "kor loogu qaado" .Shaqeynta ku jirta. Aynu nidhaahno waxaan haysannaa galka gaarka loo leeyahay (oo aan lahayn dhibic xagga hore ah). Marka waxaan fulineynaa:
Kadib, si aan u kala furfurno, waa inaan dhignaa:
Waana taas. Laakiin maadaama aan nahay isticmaaleyaal caqli badan, waxaan abuuri doonnaa 2 alias faylka ku jira .bashrc kaas oo noo abuuri doona galka noo, fuliya encfs iyo goor dambe hoomboro, Nautilus ama maareeyaha faylka aan door bidno.
iyo in la kala furfuro:
Sidaad aragtay waxaan u adeegsaday magacyada dhaqdhaqaaqa y naafo ah laakiin waxaad isticmaashaa waxkastoo aad rabto ..
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku ilaali xogtaada EncFS
Aad u wanaagsan, waxaan dhawaan wax ka qoray sida loo fayl galiyo faylasha openssl, gaar ahaan kaydinta: Halkan ayaan uga tagayaa haddii ay waxtar u leedahay qof: sida loogu kaydiyo faylasha openssl
Horaan uga faallooday kahor, laakiin waxaan u adeegsadaa isla eCryptfs. Horay ayaa loogu dhex daray kernel-ka Linux, sidaa darteed waa arrin kaliya in lagu rakibo aaladaha isticmaalaha goobaha keydka (# pacman -S ecryptfs -utils) iyo diyaar. Wax kasta oo kale waxay u shaqeysaa si la mid ah EncFs. Xitaa waad isku dubbaridi kartaa feylasha sirta ah Dropbox iyo mar kasta oo aad wax ka beddeleyso, kaliya feylka wax laga beddelay ayaa la waafajinayaa oo ma ahan galka oo dhan sida kuwa kale. Ka dib bilooyin cusbooneysiin joogto ah (waxaan u socdaa sannadka anigoo adeegsanaya, haddaanan horey u helin) weligey iima siin dhibaatada ugu yar. Yaab.
Waad ku mahadsantahay tabarucaada. Waxaan tijaabiyey ciiflehan, anigoo adeegsanaya bogga Arch ee aad ku xidhiidhiysid. Dhamaadka boggan waxaa ku yaal tixraac barnaamij: ecryptfs-simple. Waxaan eegay bogga barnaamijkan bilowgiina qoraagu wuxuu dhigay qoraalkan:
Waxaan ku lumay xogta eCryptFS mar dambena kuguma talin karo. Ilaa inta aan sheegi karo, tani uma sababayso ecryptfs-simple. Dhammaan sirta iyo goynta waxaa gacanta ku haya eCryptFS, iyo luminta xogta iyadoo ay sabab u tahay soo saarista / soo saarida khaladaadka eith eCryptFS kali ayaa ku badan internetka.
Tan waxaa laga yaabaa inay sabab u tahay qaladaadka isticmaalaha qaarkood, laakiin haddana waxay aad ugu weyn tahay halista xogta muhiimka ah. Waxaan dib ugu noqday isticmaalka xogteyda EncFS. "
Dhamaadka waxay dhaheysaa waxay dib ugu laabanaysaa EncFS.
Hagaag, markaan fiiriyo tan, waxaan ka tagayaa ecryptfs oo waxaan sii wadaa isticmaalka EncFS.
Waxaan u maleynayaa in cinwaanku uusan u dhigmin nuxurka boostada: «Ku ilaali xogtaada encfs» iyo ka hooseeya, waxa kaliya ee la sharaxay waa sida loo muujiyo galka horay looqariyay ... Kaliya sida dhaliil wax ku ool ah oo ka timid akhristaha aaminka ah.
Waan isticmaalay midkaas, laakiin waxaan dhigay 50 eray sir ah oo noocan ah:% $ H = 2ls1Ñ34日本 @ ~… ..
, Waxaan si qalad ah u tirtiray key key-ga oo aanan marin u helin faylashaas.
Wow, waa wax laga xumaado ... Taasi waa dhibaatada la gelinayo ereyada sirta ah ee cakiran, oo aan si lama filaan ah u illaawno (ama kiiskan furaha la tirtiro) oo aan iska ilowno faylasha.
Waxaan u adeegsaday xoogaa kahor laakiin waan niyad jabay